Rikoooo.com - Prepar3D Vonjeo
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 08 Jan 2017, 13:53
Raha sendra olana ianao, diso na raha misy fanontaniana momba ny Prepar3D Simulator, apetaho eto. Lazao anay ihany koa ny momba ny fanamboarana sy ny vahaolana amin'ireo olana sy hadisoana isan-karazany amin'ity simulator ity.
Joined: 05 Jolay 2016, 19:40
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by lmaselli » 24 Jan 2017, 00:54
Voalohany indrindra dia te hiarahaba anao aho noho ny asa lehibe ataonao.
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka nampiasa ny "P3D V3.4 ", ny scenario voalohany napetraka dia ny" Balearic Island "ary tsikaritro ny olana iray amin'ny haavon'ny tany amin'ny LEMH sy ny olan'ny toerana misy azy any LESL.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 24 Jan 2017, 01:18
Salama ary tongasoa eto amin'ny Forum.
Hiezaka mafy izahay hanampy anao amin'izany. Io toerana io, efa misintona endrika eto ve sa amin'ny toeran-kafa?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by lmaselli » 24 Jan 2017, 03:27
Navoaka tamin'ity pejy ity izy io. Nosy Balearic V2.
Joined: 25 Okt 2014, 14:56
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by SilhouetBob » 26 Jan 2017, 14:50
dera maro amin'ny asanao, fitaovana tsara ho antsika izy io! Manana olana amin'ny sasany aho add-on, ohatra ny Airbus A300 Multi livery pack; Nametraka tao amin'ny lahatahiry Microsoft Fs aho, ary tena mandeha tsara izany. Ankehitriny, tiako ny mametraka ity fonosana ity ihany P3D izay hita ao amin'ny Program Files (x86) ihany koa, fa ny autominstaller dia tsy mamela ahy hisafidy P3D. Na izany na tsy izany, nametraka fonosana maro hafa avy amin'ny Rikooo amin'ny roa Sims aho; inona no olana? Misaotra anao nanampy
efijery.PNG (128.72 KiB) Nijery 3941 fotoana
Ny firaiketam-po programas.PNG tsy misy intsony
programas.PNG (27.83 KiB) Nijery 3941 fotoana
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 26 Jan 2017, 16:29
Nentiko tao ity kitapo fiaramanidina ity FSX ary tena tsara.
Tsy haiko ny ampahany ara-teknikan'ny P3D fa, mety misy karazana fifanolanana amin'ireto sim roa ireto. Hitako amin'ny sary izay nomaninao fa samy nametraka tamina toerana iray ianao ... tsy zavatra ratsy ny nametrahana azy ireo amin'ny kapila mafy isan-karazany, raha vitanao izany.